မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော GrabKitchen ကို ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် | Myanmar Business Today
HomeBusinessမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော GrabKitchen ကို ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော GrabKitchen ကို ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်
Grab App မှ မှာယူသည့် အစားအသောက်များကို တစ်နေရာထဲတွင် ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စုပေါင်းစားဖိုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော GrabKitchen ကို ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း Grab Myanmar မှ သိရသည်။
GrabKitchen သည် ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဓမ္မဒါနလမ်းပေါ်ရှိSuper Container Park တွင် တည်ရှိပြီး နံနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
GrabFood မှ GrabKitchen ဆိုင်ခန်းနေရာတွင် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အသုံးအဆောင်များကို စီမံထားရှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး Grab အက်ပလီကေးရှင်းမှလည်း ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရေး ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မိတ်ဖက် စားသောက်ဆိုင်များအနေဖြင့် အစားအစာ ပြင်ဆင်၊ ချက်ပြုတ်ရေးလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
“မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စုပေါင်းစားဖိုဆောင်ပုံစံမှာ မိသားစုအိမ်ဆိုင်လေးတွေကနေ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေ၊ နာမည်ကြီး ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန် အမှတ်တံဆိပ် လုပ်ငန်းစုတွေအထိ အစားအသောက်လု
ပ်ငန်းတွေအကုန် ပါဝင်လာနိုင်ပြီး အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ကို ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံး၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အနည်းဆုံးနဲ့ စတင်နိုင်မှာပါ” ဟု Head of GrabFood Myanmar ဖြစ်သူ ကိုမြတ်ကောင်းမင်းက ပြေ
COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စားသောက်ဆိုင်များ အားလုံး ပါဆယ်အော်ဒါဖြင့်သာ ရောင်းချရမည်ဟု ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားသည့်အပြင် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်(၁၀) ရက်အတွင်း စားသောက်ဆိုင်များ ယာယီ ပိတ်ထားနိုင်သည့်အတွက် စားသုံးသူများ အခက်အခဲမဖြစ်စေဘဲ လွယ်ကူစွာ မှာယူစားသောက်နိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ အချိန်မှီ ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွင်း ၆ နိုင်ငံမြောက်အဖြစ် GrabFood ဝန်ဆောင်မှုမှ စုပေါင်းမီးဖိုဆောင်အဖြစ် GrabKitchen ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံများတွင် စုပေါင်းစားဖိုဆောင် (၅၀) ကျော်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
GrabKitchen to launch on April 10
GrabKitchen,ashared kitchen for preparing food ordered through Grab App, will be launched on April 10, according to Grab Myanmar.
GrabKitchen, the very first one of its kind, is located at Super Container Park on Dhamma Dana Street in Tamwe Township, Yangon and will be opened from 10 a.m. to 10 p.m.
It will provide all kitchen supplies for the restaurants and assistance for marketing thorough its platform.
The shared kitchen is rushed to open on April 10 allowing customers to order food online as authorities ordered restaurants to sell take-outs during 10-day Thingyan holidays amid COVID-19 outbreak.
Previous articleဥရောပသမဂ္ဂသည် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသော အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများကို ကျပ် ၇၅၀၀၀ မှ ၁၂၅၀၀၀ အထိ သုံးလအထိ ပေးအပ်သွားမည်
Next articleအသေးစားချေးငွေ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ချေးငွေနှင့် အတိုးများကို အတင်းအကျပ် မကောက်ခံရန် အစိုးရညွှန်ကြား